Zithini izibonelelo zeLactoferrin eziBonelela abantu abadala kunye neeintsana?
Aprili 9, 2020
I-Lactoferrin (LF) Iproteyini yendalo kwisilwanyana esinyusa ubisi kunye nokubonisa iipropathi ezichasene negciwane. Ukusukela oko yaqalwa kwiminyaka engama-60s, kukho izifundo ezininzi zokumisela ixabiso lonyango lwe-glycoprotein kunye nendima yalo ekungogonyini.
Nangona abantwana abancinci banokufumana ukongezwa kokuncancisa amanina, i-lactoferrin eyenziwe ngokuthengisa ayifumaneki kuyo yonke iminyaka.
1. Yintoni iLactoferrin?
I-Lactoferrin (146897-68-9) yi-glycoprotein ebopha i-iron eyintsapho yosapho ekudluliselwa kuyo. Le proteni ityebile kwii-antibodies kwaye ikho kubisi lomntu nakwinkomo. Ngaphandle koko, sisicatshulwa esibonisa uninzi lwezinto eziphilayo ezifihlakeleyo ezinje ngeenyembezi, iswekile, ulwelo lwamanzi, iswekile yepani, kunye ne-bile. Umzimba uya kukhupha ngokwemvelo i-glycoprotein ekuphenduleni kwishukumisa sokuvuvukala.
Ngaphambi kokuba wenze I-lactoferrin ithenge, thatha igqabi ngale nkcazo ukuze ubone ukuba kufanelekile na.
Amanani atyebileyo e-lactoferrin akhona kwi-colostrum, engamanzi okuqala okunamathela aveliswe emva kokubeleka. Kugcinwa ubisi kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu zokuqala emva kokubeleka. Nokuba secretion ye colostrum isondela, amaxabiso amakhulu e-lactoferrin asaza kufumaneka ngobisi oluguqulweyo kunye noluvuthiweyo.
Ke, uyikhupha njani i-lactoferrin kwi-bovine colostrum?
Ndivumele ndikuthathe ngenkqubo ethe ngqo yokuzahlula i-lactoferrin.
Isinyathelo sokuqala kubandakanya ukwahlula i-Whey kubisi. I-Whey kukukhutshwa kwezinto ezingamanzi ezihlala emva kokubola okanye ubisi oluhlanganisiweyo kunye neic acid acid. Inkqubo yokuzihlukanisa yenza ukusetyenziswa kwe-chropatography yokusebenzisana kwe-hydrophobic kunye ne-ion-exchange chromatography elandelwa ngokulandelelana okulandelayo kwizisombululo ze-saline.
IBovine colostrum ivela kwiinkomo. Ndicebile ngeeproteni, ii-antibodies, iiminerali, iivithamini, kunye ne-carbohydrate. Ezi paramitha ziqinisekisile ixabiso lonyango lwe-colostrum, ngenxa yoko, ukutsala umdla phakathi kwezenzululwazi zophando kwisizinda sezonyango.
Ngenxa yokuba umxholo we-lactoferrin uyancipha njengoko ixesha lokuya kunyuka linyuka, kunconyelwa umthombo obambele usana. Thatha, umzekelo, i-LF eqhelekileyo kwangoko emva kokuzalwa imalunga ne-7-14mg / ml. nangona kunjalo, uxinzelelo lunokuhla phantse kwi-1mg / ml ngobisi oluvuthiweyo.
Ukuba ufuna ukuphinda uvelise kwi-lactoferrin ye-immunological, kuya kufuneka ubhengeze kwi-bovine colostrum supplementation.
Umgubo owenziwe nge-lactoferrin eyenziwe ngobuninzi yimveliso ye-bovine colostrum. Nangona kunjalo, le mveliso ibeyinkxalabo kwabanye abantu ababonakala ngathi bakhathazekile lusulelo lwesifo seenkomo esihlanyayo. Ewe, mandikuqinisekise ukuba le meko inqabile. Ngaphandle koko, ezinye izixhobo zokuncedisa abantwana ze-lactoferrin zizicatshulwa zerayisi eyenzelwe ukofuzo, ngokuthanda abantu abanganyamezelekiyo kwi-lactose.
2. Kutheni usebenzisa iLactoferrin Powder njengeZongezo, izibonelelo zeLactoferrin?
I-Cutibacterium kunye ne-propionibacterium zinoxanduva lwama-acne amaninzi. I-Lactoferrin isebenza ukunciphisa iibacteria zesinyithi kunye nokunciphisa iimpembelelo zazo.
Kwezinye iimeko, i-radicals yasimahla kunye neentlobo zeoksijini ezisebenzayo zinegalelo ekwenzakaleni kweeseli kunye nomonakalo weDNA. Ngenxa yoxinzelelo lwe-oxidative, ukuvuvukala kunokubakho kunye nefuthe ekukhuleni kwamabala asebusweni. Ngokwezobunzululwazi zophando, i-lactoferrin yinto enamandla yokulwa ne-oxidant, ngenxa yoko, amandla okulwa neeradicals zasimahla.
Ukuthatha i-lactoferrin ecaleni kweevitamin E kunye ne-zinc kuya kunciphisa izilonda ze-acne kunye ne-comedones kancinci nje kwiinyanga ezintathu.
Ngaphandle koko, ukuvuvukala kubangela ngokuthe ngqo ukwakheka kwamabala asebusweni kunye nama-cysts ngokugquma iipores. Iimpawu ezichasayo zokuvuvukala ze-lactoferrin ziqinisekisa ukuphiliswa ngokukhawuleza kwezilonda.
Oogqirha bamazinyo bagxininisa kwinto yokuba impilo yakho ye-gut ibonakalisa ulusu lwakho. Umzekelo, ukuba indlela yakho yesisu ivuza okanye ayinampilo, ukusebenzisa zonke iintlobo ze-creams zobuso okanye i-probiotic ekumgangatho wehlabathi azizukucombulula ukonakala kwesikhumba, ezemidlalo, okanye i-eczema. Ukuthatha i-lactoferrin kuya kugxotha iintsholongwane ezinobungozi kwithumbu lokugaya ngelixa kuphakanyiswa umsebenzi wento encinci yeBifidus.
Ngaphandle kokunyanga i-acne, i-lactoferrin yanciphisa iimpawu ze-psoriasis kwaye ikhawuleze ukubuyisela kwakhona kwizilonda zonyawo lwe-neuropathic, exhaphake kakhulu kwizigulana ezinesifo seswekile.
Izifundo ezingenakubalwa ziyaqinisekisa ukuba i-Lactoferrin (LN) iyathintela intsholongwane, iibhaktheriya, iiparadise kunye nosulelo lokungunda ekuhlaseleni umzimba. isetyhula isebenza ngokubopha kwezi ntsholongwane, ngokubeka esichengeni isakhiwo seeseli zazo, kunye nokuthintela ii-cell receptors.
Kwisifundo esithile, izazinzulu ziphawule ukuba lactotransferrin (LTF) ibisebenza ngokukhuselekileyo intsholongwane ye-herpes kunenguqulelo yomntu. Izifundo ze-in vitro zikwabonisa ukuba esiongezelelo silawula ngempumelelo iimpembelelo ze-HIV.
Kwiidosi eziphezulu ezincinci, imisebenzi ye-lactoferrin ukulawula i-virulence ye-Hepatitis C. Ngokutsho Uphando lweHepatology, olu nyango lonyusa ukubonakaliswa kwe-interleukin-18, iprotein enoxanduva lokuqhuba umva intsholongwane yeHepatitis C. Ukusebenza ngempumelelo ephezulu, izigulana kufuneka zithathe malunga ne-1.8 ukuya kwi-3.6 yeekhilogremu zokuxhasa ngosuku. Isizathu kukuba iidosi ezisezantsi ze-lactoferrin aziyi kwenza mahluko kumxholo wentsholongwane.
Kukho iingqikelelo, ezijonga i-LF njengonyango kunyango lwe-helicobacter pylori. Xa ufaka isongezelelo kunyango lwakho lwesilonda esiqhelekileyo, amathuba okuba iziyobisi ziya kusebenza ngakumbi. Eli bango libeyimbambano yethambo phakathi kwabaphandi njengoko uninzi lubamba ukuba ukusetyenziswa kwe-lactoferrin powder kuya kuba yinto engekhoyo xa kungekho kuthatha iidosi zokufunda.
I-Lactoferrin ayiyi kulawula kuphela ukuhlanganiswa kwesinyithi emzimbeni kodwa iya kwandisa ukumiselwa kwayo.
Kukho uphando oluqhubekayo lweklinikhi olwalufuna ukuthelekisa ukusebenza kwe-LF ngokuchasene ne-ferrous sulfate kwi-anemia yokusilela kwentsimbi ngexesha lokukhulelwa. Ewe, ukusuka kuvavanyo, i-lactoferrin yangqineka inamandla ngakumbi ekuvuseleleni ukwakheka kwe-hemoglobin kunye neeseli ezibomvu zegazi.
Abafazi abatya i-glycoprotein banamanqanaba aphezulu e-iron kunye neziphumo ezibi ze-zero. I-Lactoferrin isebenza ukunciphisa amathuba okuba ungahambi kakuhle, ukuzalwa ngaphambi kwexesha, kunye ne-lowweightweight.
Ke ngoko, kuyabonakala ukuba sisongezelelo esifanelekileyo soomama abakhulelweyo kunye nabasetyhini abakwiminyaka yokuzala abantwana abaphulukene neerons ezithile xa bekwimeko yabo. Ukutya imifuno kunye nokunikela ngegazi rhoqo kunokuba nokuxhamla kwi-lactoferrin supplements.
Iphecana lempilo lesisu
I-Lactoferrin yosana incedisa i-detoxifying kwaye igcina isempilweni. Isusa iintsholongwane ezinobungozi, ezinoxanduva lokuvuvukala. Umzekelo, ezi ntsholongwane zibalela uninzi lweziganeko ze-gastroenteritis kunye ne-enterocolitis, ezonakalisa udonga lwamathumbu olukhokelela ekufeni ngaphambi kwexesha. Ukuba ngenxa yesizathu esithile, umntwana wakho akancancanga, kuyacetyiswa ukuba uguqukele kwi-bovine lactotransferrin (LTF).
3. Izibonelelo zeLactoferrin kuMntwana
Isongezelelo somntwana we-lactoferrin sithintela ukukhula kwee-microorganisms kwisisu seentsana ezisanda kuzalwa. Ezi ntsholongwane zibandakanya i-Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, Candida albicans, and Pseudomonas aeruginosa. Izifundo ezininzi ziyayibuyisela inyani yokuba ukuthathwa kwemihla ngemihla kwe-lactoferrin supplement kunciphisa amathuba e-noroviral gastroenteritis kwiintsana.
Isesesiswini, i-LF ikhuthaza ukwanda kweeseli ze-endothelial ngelixa iveza ukukhula kwee-folcle ze-lymphatic. Ke ngoko, kuyacaca ukuba ukongezwa kwe-lactoferrin kunokuba ngumyalelo wokulimala kwamathumbu.
Ukuncelisa isifuba ngowona mthombo wesinyithi we-neonates. Nangona kunjalo, abagqirha bezingane bacebisa ukuba ukongezwa kwesinyithi kuyimfuneko kuba ubisi lwebele lunezixa ezincinci zale mineral.
Ndivumele ndicacisa ukuba kutheni i-LF isesona songezo silungele iintsana ezizimeleyo kunye neentsana ezizalwe zinobunzima bokuzala. Ngokwesiqhelo, eli qela lichaphazeleka kakhulu kukungasebenzi kakuhle kwe-iron. Ukulawula isongezelelo somntwana we-lactoferrin kuya kwandisa i-hemoglobin kunye neeseli ezibomvu zegazi kwinkqubo yomntwana. Ngaphezu koko, izifundo zibonisa ukuba ukongezwa kwesinyithi kunyusa ukukhula kwengqondo kosana.
Ngamaxesha athile, iibhaktheriya eziyingozi ezifana ne-E.coli zondla kwisinyithi esikhoyo kwithumbu lesibeleko. Ukuthatha i-lactoferrin kuya kunciphisa iintsholongwane kwaye kuzitshabalalisa ngelixa uqinisekisa ukuba umamkeli ufumana zonke iiminerali ezikhoyo.
I-LF idlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lwe-immune system yomntwana. Ezinye zezi ukusetyenziswa kwe-lactoferrin powder zibandakanya ukwanda komsebenzi we-macrophages, i-immunoglobulins, iiseli ze-NK, kunye ne-T lymphocyte, enoxanduva lokungazinzi komzimba. Ngaphezu koko, ukuphatha i-LF kunciphisa ukubandakanyeka kwii-allergen.
4. I-Lactoferrin iyiphucula njani i-immune system?
Iicawa phakathi kweAdaptive kunye neNdlela yeMisebenzi yokuGonywa
Ngempendulo ye-immune yangaphakathi, i-lactoferrin isebenza ngeendlela ezininzi. Umzekelo, uphucula imisebenzi yeeseli zemvelo ezibulala (i-NK) kunye nee-neutrophils. Iprotein yandisa i-phagocytosis kwaye ibangela ukwanda kwee-macrophages.
Kwimpendulo eguqulwayo, ii-LF ezinceda ekutshintshiselweni kweeseli ze-T kunye nee-B-seli. Kwimeko yokusayinwa kokuvuvukala, zombini ukungasebenzi kunye nokusebenza kwe-immune system kuya kudibana ukumelana nokwenzeka.
I-Lactoferrin ilawula ukuveliswa kwee-cytokines zepro-pro-inflammatory kunye ne-interleukin 12, ezibonisa iipropathi zokukhusela ngokuchasene nee-pathogen ze-intracellular.
I-Mediates kwiNkqubo yokuThintela ukuShukuma kweSistim (SIRS)
Indima i-lactoferrin powder ekucinezeleni iintlobo zeoksijini ezisebenzayo (i-ROS) kuye kwasisiseko ekufundeni ngokunxulumene nokuvuvukala kunye nophuhliso lomhlaza. Ukwanda kwe-ROS kuguqulela umngcipheko ophezulu weemeko zokuvuvukala ngenxa ye-apoptosis okanye ukulimala kweselula.
Iipropathi ezichasene ne-microbial ze-lactoferrin zisika kuyo yonke intsholongwane, intsholongwane, intsholongwane kunye nosulelo lokungunda.
I Microbes iyachuma kwaye ixhomekeke kwintsimbi yokukhula kunye nokusinda. Xa behlasela umgcini, i-LF ithintela amandla abo okusebenzisa i-iron.
Ngexesha lesigaba sokuqala sosulelo, i-lactoferrin (LF) inyathelo lokulwa nayo inkuthazo yangaphandle ngeendlela ezimbini ezichaziweyo. Iprotheyini iyakuvimba ii-receptors zeselula okanye ibophe intsholongwane, ngenxa yoko, ithintela ukungena kwayo kumamkeli. Ezinye iintshukumo ezichasene ne-virobial ze-lactoferrin zibandakanya ukubekezela kwindlela yeseli ye-pathogen okanye ibhlokie i-carbohydrate metabolism.
Izifundo ezininzi zilungelelanisa ukusetyenziswa kwe-lactoferrin powder kulawulo lwe-Herpes yintsholongwane, usulelo lwe-HIV, i-hepatitis yomntu kunye no-B, umkhuhlane, kunye ne-hantavirus. Ngaphandle koko, isongezelelo sithintele ukwanda kwe-alphavirus, i-rotavirus, papillomavirus yomntu, kunye nabanye abaliqela.
Ngamanye amaxesha, i-Lactoferrin isenokungagungqi konke konke kusulelo kodwa ungaqiniseka ukuba iyakubunciphisa ubunzima bomthwalo wentsholongwane esele ukhona. Kwizifundo zangaphambili, i-LF isebenze ngempumelelo ekunciphiseni i-pseudovirus ye-SARS. Kuba i-SARS-CoV-2 iwa kwiklasi enye ne-SARS-CoV, kunokwenzeka ukuba i-lactoferrin inokunciphisa i-virulence ye-COVID-19.
Nangona ii-medics zibamba ukuba ukonyusa amandla omzimba wakho akakhuseli enye kwi-coronavirus, ukongezwa kwe-lactoferrin kuya kunceda ekulweni. Emva kwayo yonke loo nto, iingcali ezifanayo ziye zaqaphela ukuba abantu abadala kunye nabantu abanokungazinzi kangako basengozini enkulu yokufumana i-COVID-19.
5. Ukusetyenziswa kweLactoferrin Powder Ukusetyenziswa kunye nokuSebenza
I-Lactoferrin bulk powder iyakhona kwizazinzulu zophando kunye nabaphengululi abafuna ukumisela ixabiso layo lonyango emzimbeni womntu. Inamathuba abanzi okusetyenziswa kokuthintela izifo, izongezelelo zesondlo, ukutya kunye neyeza zokuthambisa amayeza, kunye nezithambiso.
Uhlalutyo lwakho kunye nokuvavanywa kwelebhu, qinisekisa ukuba ufumana umthombo na kubanikezeli bepum yeLactoferrin esemthethweni.
I-Lactoferrin powder sebenzisa ngaphakathi usana ubisi lomgubo
Ifomula yomgubo wosana iphucula ngokuqhubekayo ekuboniseni i-biochemistry yobisi lwebele lwenene ukusuka kumama. I-Lactoferrin lelona nani liphezulu leeprotein ezininzi kubisi lwebele lomama. Kuyaziwa ngokuzisa zonke iintlobo zezibonelelo emntwaneni kubandakanya ukubopha i-iron ukuze kungabikho gciwane, ukuthintela umhlaza, kunye nokukhuthaza amathambo asempilweni phakathi kwabanye.
I-lactoferrin yinxalenye yobisi lukamama wokuqala obizwa ngokuba yicostostrum. I-Colostrum iqulethe phantse kabini ngemililitha nganye ngobisi lwebele oluvuthiweyo. Oku kuthetha ukuba iintsana ezincinci zifuna ukujongwa okuphezulu kwe-lactoferrin yophuhliso oluphezulu.
Ukuphuculwa kwenkqubo yokuzikhusela komzimba wosana kuxhaswe licandelo leLactoferrin kwifomula yomntwana. Iprotheyini idlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yomzimba yokuzikhusela yomzimba kwaye imele inkqubo yokhuselo lwe-anti-viral kunye ne-anti-virus. Isiphumo esiphambili se-anti-microbial ikakhulu siziswa kukutsalwa kwe-iron-ions, ebaluleke kakhulu ekukhuleni kwebhakteriya. Ngaphandle koko, i-lactoferrin ikwakholelwa ukuba isebenze njenge-antioxidant enokuthi iqinise impendulo yokuzivikela komzimba ngokwenza amandla okwahlukanisa, ukwanda, kunye nokusebenza kweeseli zomzimba.
6. Iziphumo zeziphumo zeLactoferrin
Ukukhuseleka kwee-pivots ze-LF kwizinto ezimbalwa.
Iidosi zesininzi se-lactoferrin sinokuba seshishini. Umzekelo, xa isongezelelo sisusa ubisi lwenkomo, ungayisebenzisa ngokuzithemba kangangezixa eziphezulu zonyaka. Nangona kunjalo, xa imveliso ivela kwirayisi, amathuba okuba ngokulandelelana ngokweeveki ezimbini aya kuvuselela ezinye izinto ezimbi.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-lactotransferrin (LTF) zibandakanya;
Ngokungafaniyo noncedo oluninzi lwamayeza, i-lactoferrin ikhuselekile xa ulindelekile kunye nokuncancisa umama.
Ukudlula kwiziphumo ebezingalindelekanga ze-lactoferrin, kuthotyelwa umthamo ophakathi kwe-200mg kunye nama-400mg. Kuya kufuneka uthathe iinyanga ezimbini ukuya kwezintathu zilandelana. Kwiimeko ezinqabileyo, ixesha linokunyuka liye kwiinyanga ezintandathu.
7. Ngubani onokuthi axhamle kwiLactoferrin?
I-Lactoferrin izuzisa umama kunye nosana.
Ngexesha lokumitha, ukuphatha esi songezelelo kuya kuba nefuthe elihle kubungakanani be-fetus kunye nobunzima bayo bokuzalwa. Ukuba umama uyaqhubeka nedosi ye-lactoferrin ngexesha lokuzala, ukuvelisa ubisi lwebele kuya kuphucuka. Ngaphandle koko, umntwana uya kuqhayisa ngokungangqalanga kwi-colostrum ukugcina umzimba usempilweni.
Iintsana kunye naBantwana abancinci abangaphulwanga okanye abaxube
Isongezelelo se-lactoferrin siqinisekisa ukuba usana luhlakulela amajoni omzimba anamandla ngelixa likhusela ithumbu elibuthakathaka emathunjini. Ngaphandle koko, isongezelelo sisebenza njenge-laxative, encedisa ukuhamba kokuqala komntwana. Iifomula zeentsana ezityebileyo kwi-colostrum ziyafumaneka kubathengisi beLactoferrin basekuhlaleni nakwi-intanethi.
Isongezelelo se-lactoferrin sonyusa amanqanaba e-hemoglobin, iiseli ezibomvu zegazi, kunye neferritin. Nangona abantu abaninzi besebenzisa i-ferrous sulfate ukumelana nokusilela kwentsimbi, izifundo ezininzi zophando ziqinisekisa ukuba i-lactoferrin inamandla ngakumbi.
Ukuba ungumntu otya imifuno okanye unikezela ngegazi rhoqo, uyakufuna ukutya okutyebileyo kwe-iron ukuze wenze amanqanaba asezantsi e-hemoglobin kunye ne-ferritin. Ngaphandle koko, unokwenza i-lactoferrin elungileyo ithenge kubathengisi be-intanethi.
Abantu abanoGonyo olungaphantsi
I-Lactoferrin ikhusela umzimba kwi-pathogens ngokukhupha iintsholongwane kunye nokusulela ukwanda kweentsholongwane kunye neentsholongwane. Ikhompiyutha ibandakanyeka ngamandla ekuguqulweni kweendlela zokubonisa zinoxanduva lokujonga iimpendulo zomzimba kumamkeli.
I-Lactoferrin isebenza njengomlamli, ukubopha kunye nokulungelelanisa ukusebenzisana phakathi kwemisebenzi yokuzivikela yomzimba kunye neyangaphakathi. Umzekelo, uphucula imisebenzi ye-phagocytic ngokunyusa kwe-neutrophils kunye ne-macrophages. Kumasosha omzimba aguqukayo, le khompawundi ikhawulezisa ukukhula kwe-T-seli kunye ne-B-seli, ezibonisa ukungaziphathi kakuhle kweeseli kunye nokuthoba isidima, ngokwahlukeneyo.
Kanye njenge-lactoferrin, IgG okanye i-immunoglobulin G yiproteni yokulwa ne-microbial ekhoyo kubisi lwebele.
Izifundo ezininzi ziyafumaneka ukuchaza unxibelelwano phakathi kwe-lactoferrin ne-IgG.
Uxinzelelo lwe-lactoferrin kwi-colostrum liphezulu kakhulu kunelo le-IgG. Ngokophando lwenzululwazi, imiba eliqela ichaphazela ubungakanani bezi proteni zobisi.
Umzekelo, zombini i-lactoferrin kunye ne-IgG zijongana nobushushu kunye nokugqumeka. I-Immunoglobulin G inokunyamezela ukunyanga okushisa ukuya kutsho kwi-100 ° C kodwa kube nzima imizuzwana embalwa. Ngokuchasene noko, i-lactoferrin incipha ngokuthe ngcembe ngokunyuka kwamaqondo okushisa de ibe icekeceke ngokupheleleyo kwi-100 ° C.
Ukusekelwa kula manqaku, kuya kufuneka uqaphele ukuba ixesha kunye nobushushu obufudumeleyo ziimpawu eziphambili xa kulungiswa ubisi lwe-neonatal. Ukusukela pasteurization yobisi ibiphantsi kwengxabano, uninzi lwabantu luxazulula ukuba kungomisi-okomileyo.
Uxinzelelo lwe I-Lactoferrin (146897-68-9) kukwincopho yayo emva kokubeleka. Njengoko ixesha lokuya emva kwexesha lisanda, le proteni iyancipha ngokuthe ngcembe, mhlawumbi ngenxa yokwehliswa kwe-colostrum. Kwelinye icala, ukuwa kumanqanaba e-immunoglobulin G phantse akukhathaleli kulo lonke ixesha lokucaphuka.
Nangona kunjalo i-lactoferrin eninzi ilahla kubisi lwe-mammalia, ukuxhomekeka kwayo kuya kuhlala kungaphezulu kune-IgG. Le nyaniso isemi nokuba ikolostrum, yothutho, okanye kubisi oluvuthiweyo.
Yamauchi, K., et al. (2006). I-Bovine Lactoferrin: IziBonelelo kunye noMatshini woNyango ngokuchasene nosulelo. I-Biochemistry kunye ne-Cell Biology.
UJeffrey, KA, et al. (2009). I-Lactoferrin njengemodareythi yokuzivikela emzimbeni yendalo. Uyilo lwaMayeza ngoku.
ILepanto, MS, et al. (2018). Ukusebenza koLawulo lweLactoferrin Oral kuNyango lwe-Anemia kunye neAnemia yokuTyhumeka kwabasetyhini abakhulelweyo kunye nabangekhulelwe: Isifundo esiNgenelela. Imida e-Immunology.
Igolide, SJ, et al. (1982). I-IgA, i-IgG, i-IgM kunye neLactoferrin yesiqulatho sobisi loMntu ngexesha loKusebenza ekuqaleni kunye nesiphumo sokuLungiswa kunye nokuGcinwa. Ijenali yoKhuseleko loKutya
USmith, KL, Conrad, HR, kunye nePorter, RM (1971). I-Lactoferrin kunye ne-IgG Immunoglobulins ezivela kwi-Bovine Mammary Glands. Ijenali yeSayensi yezeMveliso.
Sanchez, L., Calvo, M., kunye no Brock, JH (1992). Indima yendalo yeLactoferrin. Oovimba abagwebayo besi sifo kubuNtu.
UNiaz, B., et al. (2019). I-Lactoferrin (LF): Iprotein ye-anti-Microbial yendalo. Ijenali yeLizwe yeZinto zokuThengisa.